Zava-nisongadina ny tombotsoan'ny NeXTChain - Chain Supply manaraka
Zava-nisongadina Hevitra misongadina
Fandefasana haingana sy maimaim-poana Mila 5 - 8 andro fiasana hahatratra ny Etazonia, 3-8 andro mankany Japon, Korea, Singapore, Malezia. Ary manodidina ny 4 - 10 andro hahatongavana any Canada, Australia, Mexico, na amin'ireo firenena EUR.
Fonosana sy marika manokana Ataovy miavaka ny sary famantarana ny marikao amin'ny vokatrao. NeXTChain dia manohana ny fanaingoan'ny OEM sy ODM ny sary famantarana ny marikao amin'ny boaty fonosana.
Dropshipping tokana Manome vokatra tsara amidy izahay. Aorian'ny fahazoana ny varotra dia ny mandoa ihany no tokony hatao ary ny NeXTChain dia hanatanteraka ny baikonao. Handefa ny fonosanao avy eo izahay amin'ny alàlan'ny fomba fandefasana entana haingana, ary hampita ny laharan'ny fanarahan-dia amin'ny baikonao. Tsy mila manao na inona na inona ianao. Raha ny zava-misy dia hitahiry ny 90% amin'ny fotoanao ianao. Tsy mila manahy momba ny lisitra, ny fotoana fandefasana ela na ny kaonty Aliexpress ianao.
Manafatra haingana kokoa Ny NeXTChain dia mamela anao hametraka baiko 100 amin'ny minitra, haingana kokoa noho ny fitaovana hafa! Mitsitsia fotoana ary mahazoa fahombiazana miaraka amin'ny mpiara-miasa dropship AliExpress!
Vokatra an-tapitrisany kokoa Ny mpanjifa dia hanana mpamatsy isan-karazany ambony ary misafidy amin'ny plethora misy vokatra mihoatra ny 500,000 amin'ny vidiny ambongadiny. NeXTChian dia manome ihany koa ny vokatra Mandresy sy ny vokatra fironana hanampiana ny mpivarotra hitantana ny asa fivelaran'izy ireo.
Filaharana fanatanterahana Auto Kitiho fotsiny izahay amin'ny fanatanterahana ny baiko rehetra. Hanatanteraka mivantana ny fanaraha-maso, ny fonosana ary ny fandefasana entana ho an'ny mpanjifanao izahay.
Fanaraha-maso sy fitantanana fonosana Miaraka amin'ny rafitry ny fizotran'ny fonosana Manan-tsaina, mamela anao hitantana tsara ny fonosanao i NeXTChain, azonao atao tsara ny mamantatra hoe aiza ny fonosanao ary rahoviana no halefa. Mba hisorohana ny tarainan'ny mpanjifa betsaka sy fitsitsiana fotoana be dia be.
Fanohanana an'i Buck Edit Ny NeXTChain dia manome fitaovana fampiasana fanovana Buck tsara kokoa sy mora kokoa hahafahanao mitantana ny vokatrao ao anaty lisitra amin'ny fotoana fohy kokoa. Afaka manam-potoana bebe kokoa ianao handinihana ny varotrao sy ny varotra varotra hafa.
Auto Inventory & Price Manage Serivisy fitantanana inventarina amin'ny fotoana tena izy, ary fanavaozana ny fampandrenesana ny vidiny mandeha ho azy araka ny fitsipika. Safidy tsara amin'ny AliExpress
Ampidiro Oberlo Raha manao orinasa dropshipping miaraka amin'ny oberlo ianao taloha. tsy vitan'ny hoe manampy anao hanafohezana ny fotoana fandefasana sy ny fanaingoana manokana ny marikao ny vokatrao izahay, fa hanampy anao koa hanafatra ny vokatra avy any oberlo mankany NeXTChain miaraka amina tsindry vitsivitsy monja fa tsy handika tsirairay.
Drafitra Maimaimpoana Mandrakizay Manome drafitra maimaimpoana mandrakizay izahay
Famolavolana mamaly App NeXTChain miaraka amina famolavolana mamaly tsara, miasa tsara amin'ny finday finday finday, latabatra na solosainao PC. azonao atao ny mitantana ny orinasam-pitetezanao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.